Idlalwa kanjani i-Will (epholile eceleni) I-Linebacker
Okushiwo ngegama lomsebenzisi kanye neziqalo
Amanani amakhulu & Imicimbi
I-Glossary yeMigomo Eyisisekelo
Inkolo & Ingokomoya
I-atheism & Agnosticism
Imiklamo & Izivivinyo
Ukuvakasha & Ukuncintisana
Gear & Izinsiza
Amasu & Ukufunda
Ezemidlalo Idlalwa kanjani & Umqeqeshi
Idlalwa kanjani i-Linebacker
Uhlangothi olubuthakathaka lwe-linebacker, noma "oluzokwenza" lubuyele emuva, lunye lwabadlali abathathu abadlali abasebenza ngokujwayelekile. Njengabanye ababili abahlukumezayo ( uSam noMike ), ukhuluma ngokuyinhloko ngokuyeka ukugijima. Kodwa, ngokushesha ushintshela ube ngumdlali we-pass pass uma kudingeka, futhi ngokuvamile uphethwe ngabanikezeli be-slot, ngisho nangaphezulu kuka-Sam. I-linebacker izofuna ukusheshisa futhi isheshe, futhi ikwazi ukuhambisa ngokuhamba kwesikhathi ne-carrier carrier ukuze iphoqe ukugijima ngaphakathi, kodwa ngenxa yokuthi ihamba eceleni kobuthakathaka ekwakheni, ivame ukuphishekela umdlalo njengoba ihamba kuye .
I-linebacker izongena imigqa emihlanu noma eyisithupha ngokujulile, futhi ngokuvamile ihlukanisa igebe "B" ohlangothini olubuthakathaka lokwakheka . Lokhu kumbeka esimweni esihle sokuyeka ukugijimela uma kufika indlela yakhe kodwa futhi kumenza abe nesisindo sokukwazi ukuphonsa ku-coverage noma ukumboza emuva ngaphandle kwendawo yangemuva. Uma une-slot receiver eceleni kwakhe, ezimweni eziningi, uzokwandisa ukulungiswa kwakhe ukuze abe sesikhundleni sokumboza slot .
I-linebacker izofuna ukuphoqelela noma yikuphi ukugijima ngaphakathi ngaphakathi, kanye nokudlala okubuhlungu nokuphindaphindiwe. Futhi unomthwalo wemfanelo omkhulu wokudlula.
Ukhiye / Funda
Izinkinobho ze-linebacker ezingxenyeni ze-linemen ngenkathi zithola izinkinobho zokuqondisa ezivela emuva. Uma efunda "isikhwama esiphansi" sigijima eceleni kwakhe, uzosheshe avuke futhi athathe noma yimaphi amabhulokhi ukuba aphoqe ukubuyela emuva kubalingani bakhe. Uma ibalekela kuye, uzobe enganqikazi futhi abukele noma yimuphi umdlalo owehla noma owehlayo.
Emdlalweni wokudlula, uzokwehla bese ehlanganisa umthwalo wakhe ofanelekayo, okungaba yindawo noma umuntu phezulu kumamukeli wangaphakathi ohlangothini lwakhe.
Ubani Okufanele Adlale I-Linebacker Engenamandla?
I-linebacker iyodingeka ibe mncintiswano kunabo bonke abathathu emkhakheni. Kumele akwazi ukumboza umhlabathi omningi uma umdlalo usuka kuye, futhi uvame ukubizwa ukuze avule isamukeli slot, kuyilapho uSam ngokuvamile ehlanganisa ukuphela okuqinile.
Ingabe abaxhasi bezintambo ngeke besabe ukuthi bangokwenyama futhi balwe. Bahlakaniphile futhi bakwazi ukufunda badlala ngokushesha ukuze banqume ukuthi bangaphi. Bayafaneleka kakhulu ekuhambeni kokudlula futhi bangakwazi ukusingatha isimo se-pass-one-one-cover coverage.
Isizathu Sokuba Umuntu Kumuntu Ulungele Kakhulu AmaLagagatsha
Funda ukuthi amaSayithi aKwaZulu-Natali kanye neziNdawo eziKhulu eziPhezulu azikhethwa kanjani
Indlela Yokushaya Indawo Yomshoshaphansi Yindlela Elula
Chase Press: Isivikelo esicindezelayo esingenakuphikisana nesikhombisa
Indlela Yokulungiselela I-Fantasy Baseball Draft ngemizuzu engu-60
Imithetho eyisisekelo yebhola
Ukudlala kanjani Ukuphepha Okuqinile
Iseluleko sabasebasha bebhola lebhola
8 Isiqalo se-Warmup Imizila yeThimba lezemidlalo le-Youth
Funda Indlela Ephumelela Kakhulu Yokudlala Umbukeli Omkhulu
Indlela Yokugcina I-Baseball Game Scorebook
I-Biography ka-Sally Jewell, owayenguNobhala we-Interior wangaphambili wase-United States
Indlela Yokusebenzisana Ngomsebenzi Wesikhashana Wokusebenza Ne-Makeup
MITCHELL Umshicileli Umlando Nomlando Nomndeni
Umndeni Wasendulo WamaRoma
Ama-German, Austria, naseSwitzerland National Anthem
Iyini Ikhiqiza Enokushisa Kakhulu?
Izilwane eziyi-10 Ezivamile Zase-Urban
Oh oh !, oh oh, Emanuel!
Kuthiwani Ngalezo Zimiso Zama-Medicare Advantage?
Iziqu Zokuphefumula Zokukhululeka Kokucindezeleka
Legends kanye nomlando weKorinte
I-Basics ye-Randonee Skiing
Iziqalo Nethonya Lomculo Womphefumulo
Iningi lezindleko zokubheka noma ukubuyisela i-americano
20 Ama-Quotes Amademoni Aphezulu Avela Ombongi WamaRoma Ovid
Indlela Abasebenzisi Basebenzisa I-Facebook Ukuthola Imithombo Nokukhuthaza Izindaba
Izinkampani eziyi-10 ze-Rock Stars 'Pre-Fame Bands
Ukubonisana Nezibonelo Zezwi LaseJapan elithi "Kuru" (Ukuza)
I-Blue Ink Recipe
Ukusabalalisa: Isivumelwano se-Washington Naval
Yeka indlela "Goodnight Irene" elondolozwe ngayo i-Leadbelly ejele
© 2021 zu.eferrit.com